नि: शुल्क उच्च गुणवत्ता FLAC संगीत डाउनलोड गर्न को लागी ग्याजेट समाचार
पाको एल गुटेरेज | | सामान्य, छवि र ध्वनी, सफ्टवेयर
आज यो ईन्टरनेटमा संगीत डाउनलोड गर्न औचित्य साबित गर्न गाह्रो छ, अब सबै चीज हामीलाई थप डाउनलोड बिना स्ट्रिमि via मार्फत वा हाम्रो उपकरणहरूमा ठाउँको आवश्यकता बिना हामीलाई दिइएको छ। तर के हुन्छ यदि हामीले खोजिरहेको कुरा उच्च गुणवत्ता हो? राम्रोसँग कुनै स्ट्रिमिंग अनुप्रयोगले हामीलाई खोजिरहेको गुणवत्ताको त्यो शिखर दिन सक्दैन यदि हामी एक ध्वनि प्रणाली परीक्षण गर्न चाहन्छौं वा हामी यसलाई उच्च आवाज घटनाहरूमा लागू गर्न चाहन्छौं। अंशमा यो तथ्य यो छ कि स्पोटिफाइ वा एप्पल संगीत जस्ता अनुप्रयोगहरूबाट संगीत हाम्रो दर भन्दा कम ब्याट्री र डाटा उपभोग गर्न संकुचित गरिएको छ।
ध्वनि उपकरणहरू वा घटनाहरूको लागि परीक्षण गर्नको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको ढाँचाहरू «FLAC is हो। ढाँचा त्यो पक्कै धेरै हो एमपी3भन्दा कम लोकप्रिय, तर ध्वनि गुणस्तरमा अत्यन्त उत्कृष्ट, यस कुराको लागि कि FLAC संगीत सुने पछि, हामी गन्दा कानहरू लाग्नेछौं जब हामी फेरि एमपी3सुन्छौं। यहाँ हामी केहि FLAC संगीत को बारे मा र स्थानहरु जहाँ तपाईं यो अद्वितीय ढाँचामा संगीत डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
1 FLAC संगीत के हो?
2 कहाँ FLAC संगीत सुन्न
2.3 फूबार 2000
3 कसरी FLAC संगीत डाउनलोड गर्ने
3.7 सबै रहित
3.8 उच्च Res Audio
FLAC संगीत के हो?
FLAC नि: शुल्क Lossless अडियो कोडेक को संक्षिप्त छ, एक अडियो कोडेक कि बिना डिजिटल अडियो संकुचित बनाउँछ। फाईल यसको आकारको 50०% सम्म कम गर्न सकिन्छ यसको गुणवत्तालाई कम नगरी नै। यद्यपि यो तपाई जस्तो छैन जस्तो लाग्न सक्छ, यो यस्तो ढाँचा हो जुन धेरै बर्षदेखि धेरै भयो र यो जोश कोल्सन नामक प्रोग्रामर द्वारा विकसित गरिएको थियो।
Xiph.org फाउन्डेशन र FLAC परियोजना यस नयाँ कम्प्रेसन कोडेक, आइसकास्ट, भोर्बिस वा थिओरा जस्ता अन्य कम्प्रेसरको इन्चार्जमा एकैलाई समाहित गर्ने कार्यमा थिए। मे २,, २०१ 26 ला लाजले Flac को संस्करण १.2013.० देखे।
यदि हामी हाम्रो संगीत फाईलहरू डिजिटल ढाँचामा भण्डारण गर्न र सुरक्षित गर्न खोज्दैछौं भने यो ढाँचा निस्सन्देह उत्तम विकल्प हो। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो नि: शुल्क हो र यसको कोड नि: शुल्क छ, त्यसैले यसलाई कुनै पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा लागू गर्न सकिन्छ।
कहाँ FLAC संगीत सुन्न
कुनै पनि प्रकारको अडियो फाइल सुन्न तपाईंलाई उपयुक्त सफ्टवेयर आवश्यक पर्दछ, यद्यपि तिनीहरू मध्ये धेरैले यो कोडेक पुन: उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। हामी कार्यक्रमहरूको छनौट गर्न गइरहेका छौं ताकि तपाईं कुनै पनि समय उत्तम अडियोको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
एक सरल र प्रयोग-गर्न-सजिलो प्लेयर, यसले हाम्रो कम्प्युटरबाट केही संसाधनहरू खान्छ, सबै अडियो फाईलहरू उपलब्ध र पहिचान गर्नका लागि मान्यता दिन्छ। यसमा धेरै कन्फिगरेसन प्यारामिटरहरू समावेश छन् जुन यसलाई हाम्रो लाइकमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ, यसले ट्याग सम्पादक र फाइल कन्भर्टर पनि समावेश गर्दछ। इन्टरनेट रेडियो स्टेशन समर्थन गर्दछ। हामीसँग पनि छ आईफोन वा एन्ड्रोइडका लागि उपलब्ध।
विकासकर्ता: आर्टेम इज्माइलोभ
अहिले सम्म सबैभन्दा लोकप्रिय, VLC एक खुला स्रोत भिडियो र अडियो प्लेयर र फ्रेमवर्क हो। लगभग सबै मल्टिमेडिया फाइल ढाँचाहरूको साथ उपयुक्त। यो अतिरिक्त प्याकेजहरू डाउनलोड नगरीकन कोडेक सामानहरूको पुन: उत्पादन गर्न सक्षम छ। यसले हामीलाई अप्टिकल ढाँचामा भण्डार गरिएको मल्टिमेडिया फाइलहरू खेल्ने क्षमता पनि दिन्छ 480p देखि 4K सम्मका रिजोलुसनहरूमा DVDs वा ब्लुरे। यो दुबैका लागि उपलब्ध छ MacOS y Windows को रूपमा आईफोन y Android.
एक बन्द स्रोत प्लेयर जुन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। यो प्रयोगकर्ताहरूको लागि अधिक केन्द्रित खेलाडी हो जुन उनीहरूको डिजिटल अडियो लाइब्रेरीको साथ फिड्लिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ, किनभने यससँग धेरै संख्यामा विकल्पहरू छन् जुन हामीले गुमाउन सक्छौं। यो विन्डोजको साथ साथ आईट्यून्सको लागि म्याकोस विकल्प पनि हुन सक्छ। हाइलाइट निस्सन्देह अनुकूलन हो, यो पनि हल्का खेलाडीहरू मध्ये एक हो जुन हामी निःशुल्क पाउन सक्दछौं। यसको लागि संस्करण छ MacOS, Windows र को मोबाइल संस्करणहरु आईफोन o Android.
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं अमेजन संगीत असीमित days० दिन निःशुल्क प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ million० लाख भन्दा बढी गीतहरूको साथ
कसरी FLAC संगीत डाउनलोड गर्ने
हामी भरपर्दो वेबसाइटहरूको चयन हेर्न जाँदैछौं जहाँ हामी हाम्रो संगीतलाई एफएलएसी ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्दछौं, एक पटक डाउनलोड भएपछि हामी माथिका उल्लेख गरिएका कुनै पनि प्लेयरमा यसको मज्जा लिन सक्दछौं।
यो अनलाइन पोर्टल स्पष्ट रूपमा FLAC ढाँचामा संगीत सामग्री अपलोड गर्न समर्पित छ। यसमा सबै विधा र युगहरूको असंख्य डिस्कोग्राफहरू छन्। तर यस वेब पोर्टलको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा निस्सन्देह हुनुको तथ्य हो सबै स्वादका लागि गुणस्तरीय सामग्री, जसको लागि तपाईंसँग स्वाद छ, यो लगभग निश्चित हो कि तपाईं आफूले खोजेको कुरा र सबै भन्दा राम्रो गुण फेला पार्नुहुनेछ। यस वेबसाइटका सबै सामग्रीहरू नि: शुल्क छन्। केहि सराहना गरियो किनभने हामी सबैलाई राम्रो संगीत मनपर्दछ तर हामी सबै यसलाई भुक्तान गरेर पहुँच गर्न सक्दैनौं।
भियतनामी मूलको वेबसाइट, जससँग सब भन्दा ठूलो सांगीतिक रिपोर्टहरू छन् जुन हामी FLAC ढाँचामा इन्टरनेटमा फेला पार्दछौं। सब भन्दा उल्लेखनीय कुरा कुनै शंका बिना यसको सबै सामग्री नि: शुल्क छ र यसले भ्रमित विज्ञापन समावेश गर्दैन, त्यसैले हाम्रो मनपर्ने एल्बमहरू डाउनलोड गर्नु धेरै सरल छ। यस वेबसाइटको अर्को फाइदा यो हो हामीलाई एकल ढाँचामा सीमित गर्दैन, तर यसले हामीलाई विकल्पहरू मध्ये एक राम्रो भण्डार दिन्छ। MP3, M4A र पक्कै पनि उच्च-गुणवत्ता FLAC ढाँचा। यसको क्याटलगको भण्डार एकदम उदार छ र तपाईं सबै युगहरू वा चलचित्र र भिडियो गेम साउन्डट्र्याकहरूबाट संगीत फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
शास्त्रीय संगीत यस चयनबाट अनुपस्थित हुन सकेन, FLAC ढाँचामा धेरै माग गरिएको विधा मध्ये एक हो। एन्ड्रोइडका लागि उपलब्ध एप्लिकेसनको साथ जुन शास्त्रीय संगीतको ठूलो सूची दिन्छ। हामी समस्या बिना सिम्फनी र पूर्ण एल्बमहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। एक धेरै मैत्री नेविगेशन इन्टरफेस, साथ साथै एक धेरै उपयोगी खोज इञ्जिनको मजा लिनुहोस् जुन तपाईंलाई सबै विकल्पहरू अन्वेषण गर्न र हामीलाई खोजिरहेका छौं फेला पार्न मद्दत गर्दछ। यस प्लेटफर्मले यसको सामग्री प्रयोग गर्न १ free नि: शुल्क परीक्षण दिन प्रस्ताव गर्दछ, यस समय पछि तपाईंले € १ of० को वार्षिक प्रीमियम सदस्यता तिर्नुपर्नेछयो एकदम महँगो लाग्न सक्छ तर यदि तपाइँ संगीतको यस विधाको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यसले पक्कै पनि तपाइँलाई लगानी गर्ने हरेक पैसाको योग्य हुनेछ।
प्राइमफोनिक - स्ट्रीमिंग क्लासिकल संगीत
सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरको संगीत प्रेमिका लागि एक उत्तम विकल्प। एक निजी अनलाइन प्लेटफर्म जसले विशाल संगीत लाइब्रेरी प्रदान गर्दछ। यद्यपि यो संगीतमा मात्र सीमित छैन किनभने हामीसँग भिडियो, पुस्तकहरू, सफ्टवेयर र कमिकहरूको पनि पहुँच हुनेछ। यस वेब पोर्टलको नकारात्मक बिन्दु कुनै शंका बिना तपाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन, तर यो एक प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त निमन्त्रणा मार्फत पहुँच गरिएको हो। यद्यपि हामीसँग अर्को सरल विकल्प छ र हामी त्यो गर्न सक्छौं संगीतसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमा अन्तर्वार्ता अनुरोध गर्नुहोस्यदि हामीले त्यसलाई जित्यौं भने, हामी रेडटेकको लागि साइन अप गर्न सक्दछौं र असंख्य संगीत डाउनलोड गर्न सक्दछौं।
हामी आइपुगेका छौं सबै भन्दा rockers को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प। यस वेबसाइटबाट हामी संगीत सामग्रीको एक अनन्तता डाउनलोड गर्न सक्दछौं रक विधाको FLAC ढाँचामा। यो पूर्ण नि: शुल्क मञ्च हो र यसमा ठूलो संख्यामा एल्बमहरू, एकल, कन्सर्ट र अन्य सामग्री FLAC ढाँचामा छ। तपाइँका सबै सामग्री सर्वरहरूमा मिडियाफाइर वा मेगा जस्ता छन्, त्यसैले डाउनलोड धेरै सरल छ। यस पोर्टलको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा सामग्री पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ, त्यसैले हामी हाम्रो संग्रह अनिश्चित काल र थप लागतको डर बिना बढाउन सक्छौं।
यस अवस्थामा यो भुक्तानी वेबसाइट हो, तर कुनै श .्का बिना सबैभन्दा सहज र इनामदायी। ठूलो संग्रहबाट संगीत प्राप्त गर्न सक्षम हुनुको साथसाथै तपाईंसँग सबै प्रकारका विधाहरू अन्वेषण गर्ने सम्भावना पनि छ, हामी जे पनि ढाँचा चाहन्छौं। FLAC ढाँचाको एक मजबूत उपस्थिति छ त्यसैले गुणवत्ता सुनिश्चित छ। केहि थप चीज जुन हामीले बाँकीमा फेला पार्दैनौं, यस वेबसाइटले हामीलाई कुनै पनि डाउनलोड गर्न आवश्यक बिना यसको स्ट्रिमि content सामग्रीको उपयोग गर्ने सम्भावना दिन्छ, ताकि हामी सिधा संगीत सुन्न सक्दछौं।
वेबसाईट जसले हामीलाई सम्पूर्ण ईन्टरनेटको नि: शुल्क एफएलएसी ढाँचामा सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टोयर्स प्रदान गर्दछ। तपाईको सूची मध्ये हामी फेला पार्दछौं २० भन्दा बढि संगीत विधाहरू भण्डारको साथ जुन आवधिक रूपमा अद्यावधिक हुन्छ। यो पनि ती पृष्ठहरु मध्ये एक हो यो एक धेरै साधारण पहुँच भएको द्वारा विशेषता हो, जसको मतलब यो हो कि हामीसँग पूर्ण पहुँच हुनेछ एकल pay तिरेको बिना तपाईंको सामग्री असीमित। कुनै पनि एल्बमको डाउनलोडसँग अगाडि बढ्नको लागि, केवल तपाईंको खोज इञ्जिनमार्फत यसको लागि खोजी गर्नुहोस्, यसलाई खोल्नुहोस् र यसको डाउनलोड लिंकमा जानुहोस्।
उच्च Res Audio
अर्को सशुल्क वेबसाइट, जुनसँग सबै ज्ञात विधाहरूबाट संगीतले भरिएको ठूलो पुस्तकालय छ। हामीले चाहेको ढाँचामा डिस्कोग्राफीहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। जे होस् हामीलाई रुचि केहि FLAC सामग्री हो र यस अवस्थामा यसको उपस्थिति ठूलो छ। यो वर्तमानमा हाई-फाई संगीत को सबै प्रेमीहरु द्वारा सबैभन्दा प्रेम ढाँचा हो। यस अवस्थामा हामी शास्त्रीय संगीत ट्र्याकहरूको ठूलो संख्या FLAC ढाँचामा पनि पाउँछौं।. यो नि: शुल्क छैन तर कुनै श doubt्का बिना हामीले यो भन्नुपर्दछ कि अनौंठो स्टोर अनौंठो संगीतको साथ यो अनौंठो ढाँचामा फेला पार्न सजिलो छैन, जुन दुवै प्रयोग गर्न सजिलो छ र एक अपरिसक अपरेशनको साथ। भुक्तानी या त वार्षिक वा मासिक हुन सक्छ, त्यसैले हामीसँग सुविधाहरू छन् जब शुल्कको भुक्तानी गर्दा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » कसरी उच्च गुणवत्ता FLAC संगीत डाउनलोड गर्न को लागी